[တရားဝင်] Wondershare Dr.Fone ၏ [Wondershare] စည်းကမ်းချက်များ & အခြေအနေများ
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ MOBILE အသက်အဘို့
Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd မှနှင့်၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများသည်အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်တို့ဆီသို့မရရှိနိုင်ထုတ်ကုန်စေသည်။ ဤ website အားဝင်ရောက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုသဘောတူသည်။ Wondershare ပညတ်တရားတော်နှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေနမြေား၏မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ရှယ်ယာအားလုံးကိုကုစားရှာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဖော်ပြဤနေရာတွင်ခွင့်ပြုမပြုမဆို rights reserved နေကြသည်။
ယင်းရှိအင်တာနက်ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်များအတွက်ရရှိနိုင်မဆိုဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုအတွက်မွေးရာပါအန္တရာယ်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd မှဤဥပဒေသငျသညျလုံးဝ (ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပါအဝင်ဆော့ဝဲမဆိုဒေါင်းလုပ်ရှေ့တော်၌ထိုအန္တရာယ်များကိုအပေါငျးတို့သကိုနားလည်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်ကဤသို့သတိပေး ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးခြင်းအားဖြင့်သင့်စနစ်၏အလားအလာရောဂါကူးစက်) ။ သင်က software ကိုမဆိုနှင့် ဆက်စပ်. အသုံးပြုသောအချက်အလက်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏လုံလောက်သောကာကွယ်မှုနှင့် backup လုပ်ထားဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်။
Image: ဒီဆိုက်ကိုအပေါ်ပြသအားလုံးသည်အမှတ်တံဆိပ်များ, splash screen, စာမျက်နှာခေါင်းစီးများ, ရုပ်ပုံများနှင့်ဂရပ်ဖစ် Wondershare သို့မဟုတ်ယင်း၏တတိယပါတီလိုင်စင်ရ၏ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, အမှတ်တံဆိပ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးစားဆင်ယင် (စုပေါင်း, "Marks") ဖြစ်ကြသည် .. အဖြစ်ဖော်ပြဤနေရာတွင်ခွင့်ပြု မှလွဲ. , ကူးယူသုံးပြီး Wondershare ၏ express ကိုစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်ပုံစံ၌ဖြစ်စေမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို Marks ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေ, ပြသခြင်း, ထုတ်လွှင်တားမြစ်သည်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့၏မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, privacy ကိုသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေများချိုးဖောက်စေနိုင်သည်။
လျော်ကြေး: သင်, ခုခံကာကွယ် indemnify နှင့် wondershare ကိုင်ထားသည်၎င်း၏ affiliates ရန်သဘောတူနှင့်၎င်းတို့၏အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများ, အေးဂျင့်များနှင့်မဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တောင်းဆိုမှုများ, ဆုံးရှုံးမှု, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, liabilities, စရိတ်နှင့်အသုံးစရိတ်ကနေများနှင့်ဆန့်ကျင်အန္တရာယ်ကင်းန်ထမ်း, ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခများအပါအဝင်မှပေါ်ပေါက်သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ, ထို site ၏အသုံးပြုမှု, သို့မဟုတ်ဤဝေါဟာရများကိုမဆိုချိုးဖောက်နှင့်ဆက်စပ်သော။
Feedback: ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကို, မှတ်ချက်များ, အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်ဆော့ဝဲနှင့် ပတ်သက်. တစ်စုံတစ်ရာဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်, ဤ website သို့မဟုတ် Wondershare နည်းပညာကုမ္ပဏီမဆိုအခြားထုတ်ကုန်များ, ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ်န့်အသတ်တုံ့ပြန်ချက်မပါဘဲအပါအဝင် Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd မှစလှေတျဆိုမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများ, , Ltd မှ ( "တုံ့ပြန်ချက်"), Non-လျှို့ဝှက်ဖြစ်မှတ်ယူရမည်။ Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd မှထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်ချက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူမည်သည့်မျိုးမရှိတာဝန်ခံယူရကြမည်ဟုနှင့်မျိုးပွားကိုသုံးထုတ်ဖော်ရန်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ပြပွဲ, Display, အသွင်ပြောင်း, လက်ရာများဖန်တီးန့်အသတ်မရှိဘဲအခြားသူများကိုရန်တုံ့ပြန်ချက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အခမဲ့ရကြလိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်ချက်ထည့်သွင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ထုတ်ကုန်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမသမျှသောစကားတို့ကိုဆိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသောမည်သည့်အတွေးအခေါ်များ, သဘောတရားများကိုသိ-ဘယ်လိုသို့မဟုတ်နည်းစနစ်ကိုသုံးပါရန်။
မျိုးဆက်ပွား: ဤနေရာတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်တွေကိုမဆိုမဆိုခွင့်ပုံတူသင်သည်ဖြင့်ပစ္စည်းကိုမဆိုမိတ္တူအပေါ်, မူပိုင်ခွင့်သတိပေးချက်များ, အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd မှတခြားစီးပွားဖြစ်ဒဏ္ဍာရီများပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤ website ၏ Software များနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လိုင်စင်တရုတ်ဥပဒေများနှင့်သင့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။
COPYRIGHT: (ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, စာသား, ဂရပ်ဖစ်, အမှတ်တံဆိပ်များ, အသံနှင့် software အပါအဝင်) ဤဆိုဒ်အတွက်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်လိုင်စင် Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd တို့ကဒီ site ပေါ်တွင်ပါရှိသောအားလုံးပစ္စည်းများကိုတရုတ်နှင့်နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ထားပါသည်နှင့်မပြုစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် , မှတဆင့်ကူးစက်သော, ဖြန့်ဝေ, ပြန်ထုတ်ပေးပြသ, အဆင်ပြေအောင်ထုတ်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်, Ltd. Wondershare နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်ပုံစံဖြင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်မီဒီယာနှင့်အလျောက်ငါတို့၌သင်ကမည်သည့်မူပိုင်ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတျ, ကူးယူခံရ အကြောင်းအရာ၏မိတ္တူအခြားအသိပေးစာ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Wondershare Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd မှတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးတရားဝင်ဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကသာအသီးအသီးတိကျတဲ့ဥပမာ Wondershare နည်းပညာ Co. , Ltd မှများ၏ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုရပေမည်။ Wondershare ၏ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Wondershare ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏အသုံးပြုမှုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်မမျှတယှဉ်ပြိုင်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။
မည်သည့်မေးခွန်းများကိုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုက်ထည့်ပါ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို အကူအညီတောင်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကုန်သည်ငွေတောင်းခံလွှာပြန်ကြားရေး: Advanced လီမိတက်
ကုန်သည်ငွေတောင်းခံလွှာလိပ်စာ: တတိယ Floor207 Regents လမ်း, လန်ဒန်, W1B 3HH, ဗြိတိန်